Jose Mourinho Oo Dad Badan Ka Yaabiyay Ka Dib Hadal Uu Ka Yiri Xiddiga Man United Bruno Fernandeshan Bruno laakiin ciyaaryahan kasta” - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Jose Mourinho Oo Dad Badan Ka Yaabiyay Ka Dib Hadal Uu Ka...
Tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa sheegay inuusan isku bedesheen Giovani Lo Celso iyo Bruno Fernandes ka dib markii ay Tottenham ku guuldareysatay saxiixa xiddiga reer Portugal xagaagii la soo dhaafay markaasoo ay la soo wareegeen Lo Celso.
Tottenham ayaa wadahadal la yeelatay Sporting Lisbon si ay u la soo wareegto Fernandes dhamaadkii xagaagii hore iyadoo Fernandes la sheegay inuu heshiis la gaaray Spurs laakiin ugu danbeysay waxay amaah kula soo wareegeen xiddigii Real Betis Lo Celso.
Lo Celso ayaa markaas ka dib heshiiskiisa u bedelay mid joogta ah intii uu ka hoos ciyaarayay Jose Mourinho halka Fernandes uu ku biiray Manchester United.
Tan iyo markii uu yimid Premier League, Fernandes ayaa wacdarro u dhigayay Man United isagoo ka qeyb qaatay sideed gool oo Premier League, halka Lo Celso uusan weli dhalinin wax gool ah islamarkaana sameynin wax caawin ah 21 kulan oo horyaalka ah uu u saftay Tottenham.
Markii la weydiiyay haddii uu ka qoomameynayo in Tottenham ay seegtay saxiixa Fernandes xagaagii la soo dhaafay, Mourinho ayaa u sheegay Sky Sports: “Waxba kama ogi arintaas, laakiin haddii ay run tahay, haddii Giovani Lo Celso uu ahaa ciyaaryahankii yimid Spurs bedelkii Bruno Fernandes, markaas waxaan dhihi lahaa ma jiro ciyaaryahan aan ku bedelan lahaa Giovani Lo Celso.
“Ma jiro ciyaaryahan aan ku bedelan lahaa Lo Celso. Kaliya ma ahan Bruno laakiin ciyaaryahan kasta”
Previous articleSheekh Shariif “Doorasho waxay u baahan tahay jawigeeda in la diyaariyo”
Next articleXasan Sheekh oo walaac ka muujiyay Xaaladda doorashooyinka dalka